Volley -ball – «CCZ7» :: Tompondakan’i Afrika faritra fahafito ny zandarimariam-pirenena • AoRaha
Volley -ball – «CCZ7» Tompondakan’i Afrika faritra fahafito ny zandarimariam-pirenena
Voahosotra ho tompondakan’i Afrika faritra fahafito ny ekipan’ny Zandarimariam-pirenena malagasy na ny GNVB, omaly teny amin’ny lapan’ny Fanatanjahantena Mahamasina. Tamin’ny alalan’ny seta efatra, 3 noho 1, no nivoahan’izy ireo ho mpandresy nanoloana ny ekipan’ny Olympique Montagne Goyaves, avy atsy Maorisy, teo amin’ny lalao famaranana ho an’ny sokajy lehilahy.
Nitarika tamin’ny seta voalohany, 25 noho 19, ny ekipan’i Honoré Razafinjatovo na i Noré Kely. Nanasahala tamin’ny isa 19 noho 25 anefa ny klioba maorisianina teo amin’ny seta faharoa. Nalain’ny zandary mora fotsiny indray nony avy eo ny seta fahatelo (25 noho 15). Efa niadiana mafy kosa ny seta fahaefatra, izay efa nisy fotoana nitarihan’ny Olympique Montagne Goyaves ny isa saingy tany amin’ny fiafaran’ny lalao no nisongadina ry Andry Be sy ry Tahiry, ka nahavoahosotra azy ireo ho tompondaka.
Teo amin’ny manasa-dalana dia efa nanilika ny ekipan’ny Faucon Flacq Camps, tamin’ny seta telo
(3 – 0), ny ekipan’ny Zandarimariam-pirenena. Ny ekipan’ny JS Ambato-nilita kosa no lavon’ny OMG tamin’ny seta telo (3 – 0), teo amin’io dingana mialoha ny famaranana io.
Teo amin’ny sokajy vehivavy indray dia ny ekipan’ny Quatres Bornes VBC avy any Maorisy no voahosotra ho tompondaka, rehefa avy nanilika ny mpiray firenena aminy Orange Club D’amitié tamin’ny seta efatra (25/19, 19/25, 25/22, 25/13), teo amin’ny lalao famaranana.
Raha ny filaharana ankapobeny dia laharana fahefatra no nisy ny ekipan’ny Bi’As, raha fahenina sy fahavalo kosa ny Stef’Auto 501 sy ny AMVB, teo amin’ny sokajy vehivavy. Laharana fahavalo sy fahaefatra kosa ny Cosfa sy ny JS Ambatonilita teo amin’ny sokajy lehilahy.